2019 April | MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခ) ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၉
– နှစ်တွေ နှစ်တွေ သစ်လိုက် ညစ်လိုက်နဲ့
သစ်ခဲ့ပေါင်းလည်း များလှပေါ့၊ ညစ်ခဲ့ပေါင်းလည်း များလှပေါ့
– သစ်ပြီးရင် ညစ်
ဟောင်းပြီးတော့ နွမ်းရတာ … ဓမ္မတာဆိုပေမယ့်
– အသွင်သဏ္ဍာန်ဆိုတာ …
နေ့မြင်ညပျောက် … ညမြင်နေ့ပျောက်
နေ့ချင်းပျောက် … ညချင်းပျောက်
– နှစ်အသစ်ဟာ … ဟောင်းနွမ်းရမှာ ဓမ္မတာဆိုပေမယ့်
– အနှစ်သာရ တခုခု ဆစ်ထုထားရစ်ခဲ့ဖို့ လိုတယ်
– ၁၃၀ဝ ပြည့်နှစ်ဟာ ဟောင်းခဲ့တာကြာပေမယ့် ညစ်မသွားခဲ့
– ၁၃၀ဝ ပြည့်နှစ်မှာ ရေနံမြေသပိတ်ကြီး ပေါ်ခဲ့တယ်
– ၁၃၀ဝ ပြည့်နှစ် ရေနံမြေသပိတ်ဟာ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးပြယုဂ်ဖြစ်တယ်
– ၁၃၀ဝ ပြည့်နှစ် ရေနံမြေသပိတ်ဟာ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲခေါ်သံဖြစ်တယ်
– ၁၃၀ဝ ပြည့်နှစ်မှာ ပုဒ်မ ၁၄၄ ကို ထွန်းလှန် အာဏာဖီဆန်ခဲ့ကြတယ်
– ၁၃၀ဝ ပြည့်နှစ်မှာ မြင်းခွာတချက်ပေါက်ရင် မီးဟုန်းဟုန်းတောက်စေရမယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်
– ၁၃၀ဝ ပြည့်နှစ်မှာ သခင်ခေါင်းဆောင်တွေ ထွန်းပေါ် တိုက်ပွဲပျော်တွေ ကျော်ခဲ့တယ်
– ၁၃၀ဝ ပြည့်နှစ်မှာ ပုလိပ်တပ် လှံစွပ်တပ် မြင်းစီးတပ် သေနတ်ကိုင်တပ်တွေကို ထိုးဖေါက် ရွှေတိဂုံခံတပ်အထိ ရောက်ခဲ့တယ်
– ၁၃၀ဝ ပြည့်နှစ်ဟာ သမိုင်းမှာ ဂုဏ်ရောင်ပြောင်တဲ့နှစ်ပေပဲ
– ၁၃၀ဝ ပြည့်နှစ်ဟာ မဟောင်းနိုင်တဲ့ နှစ်၊ မညစ်နိုင်တဲ့ ခေတ်ရဲ့ အောင်ပွဲ သင်္ကေတပေပဲ
– လာမယ့် နှစ်သစ်ဟာ ၁၃၀ဝ ပြည့်နှစ်ရဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေကို အရောင်ပြန်တင်ပေးနိုင်မလား
– မေးခွန်းတခု၊ စိန်ခေါ်မှုသဖွယ် ရှိနေတယ်
– တကယ့်နှစ်သစ်ဖြစ်ဖို့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ကျော်ဖြတ်ရဦးမယ်
– သမိုင်းမှတ်တိုင်အသစ် စိုက်ထူရဦးမယ်
– လာမယ့် နှစ်သစ်မှာ တန်းတူရေးကို အလေးပြု
အဓမ္မမှုကို ဖီဆန်ဖို့တော့ ဒိဋ္ဌ လိုပေလိမ့်ဦးမယ်။
၁၇ ဧပြီ၊ ၂၀၁၉။
သာထက်အောင် ● လူရောင်စုံ၊ ဘဝရောင်စုံ၊ ဒုက္ခရောင်စုံ (၈) (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၈၊ ၂ဝ၁၉ ချောက်မှာနေ့လည်စာစားပြီး ချောက် – ဆိပ်ဖြူမြစ်ကူးတံတားကိုဖြတ်တော့ မွန်းတိမ်းပြီ။ တံတားပေါ် ဥဒဟိုသွားလာနေတဲ့ ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေငေးရင်း.....
ပန်းချီ (ဦး) ဝင်းဖေ၊ ဧရာ၀တီဝက်ဆိုက် လောကဓာတ်ခန်းသာဂိ – ရာဇဝင်ထဲမှာ ဇော်ဂျီကို ထားရစ်ခဲ့ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၉ မောင်ရစ် ဒီတခေါက် နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတော့ (မြန်မာပြည်ကနေ ပြန်လာတာကို...
ကိုအောင်မှိုင်း ● သြင်္ကန်ဆုတောင်း (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၉ ပိတောက်တွေဝေနေတဲ့ တို့တိုင်းပြည်မှာလေ။ ယမ်းငွေ့တွေဖြန်းပက်လို့ အလှတွေပျက်ခဲ့။ သြင်္ကန်မျက်နှာပေါ် ထင်နေတဲ့ မျက်ရည်စတွေ။ စစ်ပွဲတွေကြားက စွန်းထင်းနေတဲ့ သွေးစတွေ။ စစ်ပွဲတွေကြားက ကခုန်နေကြတဲ့...
ထွန်းသိန်းဦး ● အိပ်မက်ထဲက ပင်လယ် (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၉ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ Krishan Coupland ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ Bare Fiction Prize ဆုရဝတ္ထုတို The...
အေးငြိမ်း ● အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစား (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၉ သည်ကနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ စာသင်ရာနေရာသို့ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီး (Minister of State for Manpower and National...
ကမ်လူဝေး ● ဒီမိုကရေစီ
ကမ်လူဝေး ● ဒီမိုကရေစီ (Langston Hughes ရဲ့ Democracy ကိုဘာသာပြန်သည်။) (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၉ အလျော့ပေးညှိနှိုင်းမှုနဲ့ အကြောက်တရားတွေကို ဖြတ်လို့ ဒီမိုကရေစီဟာ ရောက်မလာဘူး ဒီကနေ့ ဒီနှစ်...
ဝါကျဖြူ ● သတ္ထုအရေခွံများ
ဝါကျဖြူ ● သတ္ထုအရေခွံများ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၉ မီးရထားခိုးစီးလာတဲ့ တစ္ဆေတကောင်က မသိစိတ်နယ်ပယ်ထဲကနေ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတွေနဲ့ ကမ္ဘာကီးရဲ့မျက်နှာကို ဆွဲခွာချပစ်နေပါတယ်။ ပြင်မရတဲ့ နာရီတွေထဲမှာ နှစ်ဘဝမြောက် ခိုငှက်တွေ ကျောက်သားတွေကိုထိုးဆိတ်နေတဲ့ နှုတ်သီးတွေက...
ဇင်လင်း ● ငြိမ်းချမ်းရေးသို့ ….
ဇင်လင်း ● ငြိမ်းချမ်းရေးသို့ …. (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၉ “ငါ” မပါဘဲ မင်းဆီလာဖို့ ငါ ကြိုးစားနေတယ် မင်းလာမယ်ဆိုရင်လည်း “ငါ” ကို ခေါ်မလာခဲ့နဲ့ မင်းလာတဲ့အခါ “ငါ”...
ဝင်းဖေ – သင်္ကြန်အတွေး
ဝင်းဖေ – သင်္ကြန်အတွေး မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၉ (မိုးမခ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) (မိုးမခ ၂၀ဝ၇ သင်္ကြန်အစီအစဉ်ကနေ ပြန်လည်တင်ဆက်ပါတယ်) မြန်မာသင်္ကြန်နဲ ့ပတ်သက်ပြီး ထူးခြားတာလေးတစ်ခု တင်ပြချင်ပါတယ်။ “ကမ္ဘာ့လူသားတွေမှာ မွေးရာပါ...
ပန္းခ်ီသန္းေဌးေမာင္ – သၾကၤန္က်ၿပီ အခ်စ္ေရ
ပန္းခ်ီသန္းေဌးေမာင္ – သၾကၤန္က်ၿပီ အခ်စ္ေရ (မိုးမခ) ဧၿပီ ၁၃၊ ၂၀၁၉
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – သမ္မတထရမ့်နှင့် ဒီမိုကရေစီ၏နောင်ရေး
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – သမ္မတထရမ့်နှင့် ဒီမိုကရေစီ၏နောင်ရေး (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၉ ဒီမိုကရေစီစနစ်များ ကျဆုံးခြင်းအကြောင်းများ – အခန်းဆက် ၃၀ Steven Levitsky နှင့် Daniel Ziblatt...
မောင်ရစ် – ကဗျာဆရာ၏ နောက်ဆုံးခရီး လိုက်ပို့ခြင်း
မောင်ရစ် – ကဗျာဆရာ၏ နောက်ဆုံးခရီး လိုက်ပို့ခြင်း (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၉ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ တောင်ဒဂုံနဲ့ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရဲ့ ကျည်စုသုဿန်ကို ရောက်ပါတယ်။ ကဗျာဆရာမောင်သင်းမိုး(၆၇နှစ်)ရဲ့ နောက်ဆုံးအသုဘခရီးကို လိုက်လံပို့ဆောင်တာပါ။...
သန်းဝင်းလှိုင် – သူရဦးရွှေမန်းအပေါ် တပ်မတော်၏သဘောထား
သန်းဝင်းလှိုင် – သူရဦးရွှေမန်းအပေါ် တပ်မတော်၏သဘောထား (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၉ အခန်း (၇) သူရဦးရွှေမန်းအပေါ် တပ်မတော်၏သဘောထား (မိုးမခစာအုပ်စင်ကောက်နှုတ်ချက်- သူရရွှေမန်းကိုလေ့လာခြင်း မှ) တပ်မတော်ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များက သူရဦးရွှေမန်းသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကကို...
ကိုသန်းလွင် ● အချုပ်အခြာ အာဏာ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၉ လွန်ခဲ့သောလစောစောပိုင်းက တရုတ်ပြည်အရှေ့ပိုင်း ဂျင်ဟူ (Jinhu County) နယ်တွင် အဘယ့်ကြောင့်ကလေးငယ် ၁၄၅ ယောက်မှာ ဒိတ်လွန်နေသော...
မောင်ထိန်လင်း (မြို့သာ) ● စားပွဲပေါ်က ကမ္ဘာလုံး
မောင်ထိန်လင်း (မြို့သာ) ● စားပွဲပေါ်က ကမ္ဘာလုံး (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၉ စားပွဲပေါ်မှာ ကမ္ဘာလုံး ရှိတယ် ဒါကြောင့် စားပွဲပေါ်မှာ စစ်ပွဲရှိတယ်။ စားပွဲပေါ်မှာ ကမ္ဘာလုံး ရှိတယ် ဒါကြောင့်...
လွင် (ဘော်တွင်း) ● ချိန်ခွင်လျှာကလေး
လွင် (ဘော်တွင်း) ● ချိန်ခွင်လျှာကလေး (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၉ သဲတုန်လေးဟာ ချိန်ခွင်ရဲ့လျှာကလေးကို ဘောင်ထဲမှာပိတ်မိနေအောင် လက်ကလေးနှစ်ဘက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ လွှတ် လိုက်တာနဲ့ ချိန်ခွင်လျှာကလေးက တဖက်ကို စောင်းပြီးထွက်လာတယ်။ အဲဒီလျှာကလေးကို...